Kuyini ngempela ukuxhumana phakathi kokuba umuntu enze umsebenzi kanye nokufuna iqiniso? Ukwenza komuntu umsebenzi kunaliphi iqhaza ekutholeni insindiso? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Umuntu ushintsha kancane kancane ngokuhlala elandela inqubo yokusebenza, futhi ngale nqubo ukwazi ukukhombisa ukwethembeka kwakhe. Futhi, uma ukwazi ukwenza umsebenzi wakho, uzothola amaqiniso amaningi, futhi nalokho okubonakalisayo kuzoba nobuqiniso obukhulu. Labo abamane benze ngokugcina icala umsebenzi wabo futhi abangalifuni iqiniso bayokhishwa ekugcineni, ngoba labo bantu abawenzi umsebenzi wabo ngokweqiniso, futhi abalenzi iqiniso ekugcwalisweni komsebenzi wabo. Abantu abanjalo bayohlala bengaguquliwe futhi bayoqalekiswa. Abakuvezayo akuve nje kungahlanzekile, kodwa baveza ububi bodwa.
kwesithi “Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Onesimo Somuntu kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Kufanele umsebenzi wenu niwenze ngokwamandla enu onke ngezinhliziyo ezivulekile neziqotho, nizimisele ukwenza noma yini edingekayo. Njengoba nishilo, lapho kufika usuku, uNkulunkulu ngeke aphathe ngokungafanele noma ubani ohluphekile noma wakhokha ngenxa Yakhe. Lolu ukholo okufanele sibe nalo, futhi akufanele ulukhohlwe. Yile ndlela kuphela engingakhulula ngayo ingqondo yami ngani. Ngale kwalokho, angisoze ngakwazi ukukhululeka ngani, futhi niyohlala niyizinto ezinengekayo Kimi. Uma nonke ningalandela unembeza wenu ningenzele konke, nizame konke emsebenzini wami, futhi ninikele ngokuphila kwenu emsebenzini wami wevangeli, ngeke yini inhliziyo yami ijabule ngani? Ngeke yini ngikhululeke ngokugcwele engqondweni mayelana nani?
kwesithi “Isiphetho Somuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Uma ukujabulela ukuba ngumenzi womsebenzi endlini kaNkulunkulu, usebenza ngokuzimisela nokwethembeka emfihlakalweni, ngaso sonke isikhathi uhlala upha futhi ungathathi, ngithi-ke ungongcwele othembekile, ngoba awufune mklomelo futhi ungumutu oneqiniso nje. Uma uzimisele ukungalifihli iqiniso, uma uzimisele ngokunikela konke okwakho, uma ukwazi ukudela impilo yakho ngoNkulunkulu futhi ube ngufakazi, uma uthembekile, kuze kufike eqophelweni lapho wazi kuphela ukwanelisa uNkulunkulu, futhi ungazicabangeli noma uzithathele ngokwakho, ngithi-ke laba bantu abanjalo yilabo abondliwa ekukhanyeni futhi abayophila phakade embusweni.
kwesithi “Izexwayiso Ezintathu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Okwedlule：Umuntu angazithoba kanjani futhi ezwe umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina ukuze athole insindiso?
Okulandelayo：Kungani ukwamukela insindiso nokupheleliswa uNkulunkulu kudinga ukubekezelela ubunzima obuningi kangaka?